Shiinaha Hydroxyethyl cellulose tayo sare leh ee daahan warshadaha soo saaraha iyo Supplier |Longou
Hydroxyethyl cellulose tayada sare leh ee warshadaha daahan
1. Muuqashada HEC Hydroxyethyl cellulose waa mid aan dhadhamin, ur lahayn iyo caddaan aan sun ahayn ilaa budo granular jaalle ah.
2. Waa nonionic cellulose ether.HEC waxa ay leedahay hawlo dhumuc, dhisid, emulsify, kala dirid, xasilinta iyo ilaalinta biyaha.Waxaa si fudud loogu milmay biyo qabow iyo kulul si ay u bixiso noocyo kala duwan oo ah viscosity xalka, samaynta filim iyo bixinta saamaynta kolloid ilaalinta.
3. HEC waa dhumuc weyn ee korantada diirada sare leh.Awoodeeda biyo-hayntu waxay laba jeer ka badan tahay MC.Waxay leedahay nidaam socodka socodka wanaagsan.olmer.
3. HEC waa dhumuc weyn ee korantada diirada sare leh.Awoodeeda biyo-hayntu waxay laba jeer ka badan tahay MC.Waxay leedahay nidaam socodka socodka wanaagsan.
4. Rinjiga emulsion-ka wanaagsan wuxuu u baahan yahay rheology rinji gaar ah si loo hubiyo sinnaanta ganaaxa iyo baabi'inta dariiqyada burushka ee dusha sare ee filimka rinjiga qalalan.Riyoloojiyadu waxay la xiriirtaa xajmiga iyo qaybinta granules emulsion, weli xajmiga iyo qaybinta ayaa saameyn ku leh nidaamka xasilinta iyo tignoolajiyada polymerization ee lagu qaatay polymerization.
5. polymerization ee ay sababto isticmaalka HEC sida colloid ilaalinta waxay soo saari doontaa tayada emulsion isku mid ah, iyada oo aan la kala duwanayn qaybaha kala duwan ee emulsion: Dhanka kale cabbirka granule emulsion waxaa laga yaabaa in lagu xakameeyo baaxadda cidhiidhiga ah iyo granules waxay u adeegi doonaan wax aan lagama maarmaan u ah polymerization emulsion.
6. Polymerizations-ka emulsion-ka ee sida caadiga ah u isticmaala HEC sida kolloid-ka ilaalinta waxaa ka mid ah
Vinyl acetate iyo monomers kale oo koobiyeeyayaal ah sida acrylic tesin, resin butadiene para-butadiene resin ethylene iwm.
7. Methyl acrylic resin iyo monomers kale oo koobiyeeya sida acrylate, butadiene iwm.
Hydroxyethyl cellulose ee warshadaha daahan-1
Nooca HE30MC, HE50MC, HE100MC...
Cufnaanta weyn 250--550 (kg/cm3)
Cabbirka walxaha (dhaafaya 0.212mm)% ≥92
Qiimaha PH 5.0--9.0
Viscosity (2% xal) 300--10 00000S (mPa.s, NDJ-1)
1. HEC waa dhumucda inta badan lagu isticmaalo rinjiga Latex.
2. Marka lagu daro dhumucda rinjiga Latex, waxay leedahay shaqada emulsifying firidhsan, xasilinta iyo ilaalinta biyaha Aasaasheedu waxay saameyn weyn ku leeyihiin dhumucdooda, iyo midabka kabaha wanaagsan, sameynta filimada iyo xasilloonida kaydinta.
3. HEC waa nonionic cellulose ether kaas oo loo isticmaali karo tiro balaadhan oo ah PH.Waxay leedahay la jaanqaad wanaagsan oo ay la socoto walxaha kale, sida midabka, kaabayaalka, buuxinta iyo cusbada, karti-shaqayn wanaagsan iyo heerar.Ma fududa in la diifiyo mooyaane.
➢Kala firdhisan fudud iyo ku milmi biyo qabow, ma jiro buro
➢Iska caabin aad u sarreeya
➢aqbalida midabka heer sare ah iyo horumarinta
➢Wacanxasiloonida bio.ma jiro khasaaro viscosity
Hore: Ku-samaynta HEC aad u fiican ee kiimikooyinka maalinlaha ah
Xiga: Viscosity sare HEC loo isticmaalo qodista batroolka
Filim Hore Oo Saamayn Iyo Isqurxin
HEC ee warshadaha daahan
Waxyaalaha lagu daro wakhtiga Furan ee Dheer
Kiimikooyinka Dhismaha Haynta Qoyaanka
Hydroxyethyl Methyl Cellulose Ether HEMC soosaar ...
Waxyaabaha lagu daro Hydroxyethyl cellulose ee xanuunka dhagaxa
Nooca dhaqaale ee cellulose ether HPMC ee qalalan-...